Arfiiwwan Addaa Saaguu
Faankishiniin kuni arfiiwwan addaa kan akka mallattoowwan filannoo, sanduuqota, fi mallattowwan bilbilaa garakeessa barruukeeti akka saagdu sii eeyyamu.
Filannoo arfiiwwan hundaa ilaaluuf, Saagi - Arfii Addaafili.
Dirree bal'aa filannoo keessaa arfii barbaadamu yookiin arfiiwwan hedduu walitti aansuun cuqaasi.Arfiiwwan gara jala qaaqichaatti agarsiifamu. Yommuu qaaqa TOLE tiin cuftu, arfiiwwan agarsiifaman hundi bocquu filatame keessaa galmee ammaa keessatti saagama.
Dirree naqa barruu kamiifuu (dirreewwan kan akka qaaqa Barbaadii fi Bakka buusii keessaa) kan dhiibdu Shift+AjajaCtrl+S qaaqa Arfiilee Addaa banuuf.
Yeroo ammaa karaan ittiin gabatee furtuu irraa sududaan malduu waliin xalayoota galchan sadiitu jiru.
Sun Solaariisii: Gabatee furtuu Sun fayyadamuudhaan. Jalqaba furtuu barqii gara mirga kabala iddootti argamu dhiibi, achii fooyyii jalqabaa fi lammaffaa galchi.
Liinaksii / NetBSD: dead-keys/Furtuuwwan du'oo fayyadamuudhaan. Foddaa xterm/dhumaa keessaa jalqaba furtuu (´) yookiin (`) dhiibi. Arfiin argii irratti maul'achuun irra hin jiraatu. Amma qubeewwan akka "e" dhiibi. e malduun é ykn è kannamaaf. Yoo tahuu baate,faayilii XF86Config keessa yoo "nodeadkeys" XkbdVariant achitti fe'ameera tahe mirkaneessiti bakka isa buusi.Jijjiiramaa qeeyee qindaa'e SAL_NO_DEADKEYS, kan dead-keys/furtuuwwan du'oo kaka'umsalaa qabaachuus ni dandeessa.
Sirnoota yuuniksii hunda: (Caatoo Alt) akka furtuu barqii dabalataatti. Furtuun (Caatoo Alt)LibreOffice keessatti akka furtuu barqiitti hojjechuu ni danda'a, yoo jijjiiramaa qeeyee SAL_ALTGR_COMPOSE qindeessite. Furtuun(Caatoo Alt) jijijjiirtuu haalataa/switch_mode ceesisuu qaba, akka , fakkeenyaaf, xmodmap -e "keysym Alt_R = Mode_switch" qindaa'uu qaba. Jalqaba (Caatoo Alt) dhiibi, achii fooyyiin isa jalqabaa , achii fooyyii isa lammaffaa. Arfiiwwan akka sirna soolaariisii faayilii /usr/openwin/include/X11/Suncompose.h. keessaa irratti ibsametti walitti makamu.
Title is: Arfiiwwan Addaa Saaguu